Iindaba - "Zisa umoya kunye namaza, amaphupha kunye nohambo ngo-2021 ″ iNkomfa yoNyaka
Ukujonga emva kwixesha elidlulileyo kwaye sijonge phambili kwikamva, nge-23 kaJanuwari, i-Guangzhou BEULINES ibambe inkomfa yesishwankathelo sokuphela konyaka enomxholo othi "Zisa umoya kunye namaza, amaphupha kunye nohambo ngo-2021". Usapho lakwa-BEULINES luhlanganisene kunye. Sicinga, sithathela ingqalelo iingqondo, kwaye sicwangcisela ikamva. Sikhuthaza ukuqhubela phambili kwaye sincoma ukugqwesa, kwaye sibulela usapho lakwa-BEULINES ngomsebenzi wabo onzima.
Ukuze sikwazi ukusabela kwimeko yobhubhane kwaye sisebenzisane nokuthintela ubhubhane olusebenzayo, kulo nyaka sitshintshe ifomathi yentlanganiso yonyaka kwaye saqhuba iingxoxo ekujoliswe kuzo malunga nomsebenzi wamasebe ahlukeneyo ngohlobo lweesemina. Wonke umntu ushwankathele umsebenzi wabo, amava okwabelwana ngawo, iingcinga, kunye neengxaki ekujoliswe kuzo kunye nobunzima, kwaye baxoxe.
Kulo nyaka, ii-BEULINES zimi kunye nabathengi, zijamelene nokuthintela kunye nokulawula ubhubhane, zijamelene nobunzima bokuhambisa, kwaye bajongana nohlengahlengiso lwesiko. I-BEULINES inyanzelisa ukuqhubeka kwezinto ezintsha, ulawulo olungqongqo, kunye nenkonzo efanelekileyo yokubonelela abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nezisombululo ezibanzi.
Ukusuka ebunzimeni ekuqaleni konyaka ukuya kwinkqubela phambili yokuphela konyaka, ulawulo lomgangatho wenkonzo engqongqo kunye nesimo sengqondo sokusebenza ngokugqwesileyo sisiseko se-BEULINES ukwenza inkqubela phambili kwindawo yentengiso engqwabalala ngo-2020. noxanduva kwezentlalo ngelixa sibambelele kuphuhliso lweshishini, esaziwa ngabathengi, abasebenzi kunye neli shishini.
Kwi-2020, i-BEULINES ibonakalise ngokupheleleyo ukusebenza kwayo kunye nokusebenza kakuhle kwicandelo lezobugcisa kwezonyango, kwaye yayisaziwa kakhulu ngabathengi.
2020 unyaka we-19 wokusekwa kwe-BEULINES.
Sisiganeko esibalulekileyo kuphuhliso lwee-BEULINES.
Iinjongo ezintsha sele zimiselwe, kwaye uhambo olutsha sele luza kuqala
Nokuba amaxesha atshintsha njani.
Logama singayilibali injongo yethu yoqobo, siya kuqhubeka nokusokola, ibophelelwe kukungenisa ingomso eliqaqambileyo!
Kunyaka omtsha we-2021, ii-beuline ziguquliwe kwaye zaqala ukuhamba ngomkhumbi, siya kuyigcina injongo yethu yokuqala kwaye sikhwele umoya kunye namaza!
Wamkelekile ngo-2021 umtsi omtsha!